Shirkii ka furmi lahaa magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag oo la dardar galiyay
SOMALITALK - DHAHAR
Bosaaso:- Waxa xafiiska magaalada Bosaaso ee shabakada LaasqorayNet nagu soo booqday Nabdoon Cabdulaahi Cabdi Ibraahim waxana uu ka warbixiyay shirkii ka dhici lahaa magalaada Dhahar ee gobolka Sanaag waxana uu sheegay Nabadoonku inuu Jaaliyadaha dibada ee beesha Warsangali usoo gudbinayo Baaq kaas looga gol leeyahay inay ka soo qayb galaan shirka gacan wayna ka gaystaan Kharashka kubaxay Shirka.
Nabadoon Cabdulaahi Cabdi Ibraahim waxa kale oo noo sheegay inuu shirku furmi doon-22-bishan aynu ku jiro waxana uu soconayaa ilaa 10-cisho, isagoo intaas ku daray inuu yahay shirkii aaya ka talinta Beesha Warsangali oo aah shirkii lagu dhisi lahaa Maamul.
Nabadoonku waxa uu ka codsanayaa Dhamaan jaaliyadaha Beesha Warsangali inay ka soo qaybgalaan shirka sida ugu dhakhsiin yaha badan si uu unoqdo shir loo dhan yahay.
Gabagabadii nabadoonku waxa uu usoo gudbinayaa jaaliyadaha Beesha Warsangali Shantan qodob.
Inay dhamaan Jaaliyada Beesha Warsangali ee ku nool daafa aduunka gasoo qaybgalaan shir ka dhacay -22 bisha May magaalada Dhahar
Shirkan oo ah aaya ka talintii mandaqada beesha warsangali
Waxaanu ka codsanaynaa jaaliyada beesha Warsangali ee danaynaysa tanta beesha warsangali inay ka soo qayb galaan shirkaas
Shirkan oo la danaynayo in lagu dhiso maamul
Jaaliyada beesha Warsangali waxa laga rabaa inay Kharsha Shirka kubaxaya bixiyaan.
Nabadoon Cabdulaahi Cabdi Ibraahim waxa uu noo xaqiijiyay inuu Nabdoonadan hoos ku qoran uu afkuuda ku hadalayo.
Nabadoon Cabdulaahi Cabdi ibraahim
Nabdoon C/qaadir Maxamed ismaacill(Qoobay)
Nabadoon Maxamuud Xasan Maxamuud
Nabadoon Siciid Xasan Xaaji(waraaba cade)
Nabadoon Maxamed Xasan Cumar
Nabdoon Saxar Diid Cali Dhawaaq
Nabadoon Xuseen Gurxan Geedi
Nabdoon Axmed Askar Cali Shire
Nabdoon Jaamac Maxamuud Maxamed
Nabadoon Maxamuud Farax Ducaale
NB: Waxa soo tebiyay Nabadoon Cabdulaahi Cabdi ibraahim